GraphiSoft ArchiCAD 21 Crack Activator 2018 for Windows & mac အတွက်လို့ Torrent
နေအိမ် » ရိုက်သံ & active » GraphiSoft ArchiCAD 21 ရိုက်သံ
GraphiSoft ArchiCAD 21 ရိုက်သံ
အားဖြင့် Anastasiya Libra | ဒီဇင်ဘာလ 12, 2017
Graphisoft ArchiCAD Download 21 ဦးဝင်းများအတွက် Crack. & မက်.
You are searching for best Graphisoft ArchiCAD 21 ရိုက်သံ, သင်ဘယ်နေရာအခြားသူကရှာတွေ့နိုင်ရင်ပြီးနောက်သင်ျာရာအရပျမှာ. SActivator.com ကုန်ကျစရိတ်၏အခမဲ့သင်တို့၏အလိုဆန္ဒ၏အက်ကွဲဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်. Graphisoft ArchiCAD 20 အက်ကွဲထက်ပိုမိုနှင့်အတူစေလွှတ်လိုက်ပါတယ်သည့်အံ့ဩပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ် 20 အများဆုံးအသစ်အစိတ်အပိုင်းများ. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ဗိသုကာထူးခြားတဲ့ဒီအပိုဆောင်းစီမံကိန်းကိုထံမှအကြီးမြတ်ဆုံးအားသာချက်ရနိုင်အတော်လေးအသုံးဝင်ပေါင်းစုံလက်တွေ့ကျတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. Significantly improved than past forms which are helpful for 2D/3D plans of specialists’ structures. လက်တွေ့ကျကျ, delicate Graphisoft ArchiCAD 20 အက်ကွဲသူတို့၏အလုပ်များကိုနိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းတိုင်းဝေဖန်ယန္တရားပါရှိသည်. ဒီထုတ်ကုန်တူရိယာများနှင့်ပျဉ်ပြားကဲ့သို့နှစ်ဦးပုဒ်မသို့အထီးကျန်ခဲ့. Graphisoft ArchiCAD 20 နောက်ဆုံးရဗားရှင်း Crack တဲ့လမ်းပိုင်းလုပ်၏တာမပါဘဲသင်သည်တတ်နိုင်သဖြင့်ကွပ်ထားတဲ့တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာများထဲမှတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါဝင်သငျသညျဒုက္ခလုပ်ငန်းများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပင်ထူးခြားသောမော်ဒယ်များစမ်းသပ် objects.
Graphisoft ArchiCAD 21 ထူးခြားချက်များကို crack
အက်ကွဲ Key ကိုလက်လှမ်းသည်
သငျသညျရင်းနှီးစွာ interface ကိုတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်
အဆိုပါ update ကိုပြုမိပါလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်လက်လှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါ.
အားလုံးအသေးစားနှင့်ပါးရည်နပ်ရည်တ္ထုများအတွက်အကောင်းဆုံး GDL ဆန်းသစ်တီထွင်မှု.
စာကြည့်တိုက်နှင့် item ကို၏အပြုသဘောဆောင်သောအသင်းအဖွဲ့မူဘောင်၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးနေသည်.
လုံးဝလေယာဉ်အားလုံးကိုအကြောင်းပြချက်နှင့် technique ကိုတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်ထည့်သွင်း, segments များ.
Oversee and administrate all kind of supplies to be utilized, ထိုသို့နိယာမထူးခြားမှုင်.
ဒါဟာထိုနည်းတူ server ကို information model ရဲ့ဆက်နွယ် (အဆောက်အအုံပြန်ကြားရေး Modeling) တက်စောင့်ရှောက်နှင့်အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များကိုတဆင့်စုဆောင်း၏အားလုံးရငျးမွစျမှဆက်သွယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဂရပ်ဖစ်အားဖြင့်စေသည်.
၎င်း၏ဒေါင်းလုတ်ဆွဲအကြောင်းလာတဲ့အခါလာ, Free Download our Graphisoft ArchiCAD 20 ရိုက်သံ, Serial Key most recent Version that recently propelled in Oct 2016 ပြီးပြည့်စုံနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အတူတက်နေဖို့ဒြပ်စင်များနှင့်အဆင့်မြှင့်ဒီဇိုင်း. If you don’t mind download and introduce Graphisoft ArchiCAD 20 ပြီးပြည့်စုံသော Crack တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ Serial Keys ကိုနှင့်အတူနောက်ဆုံးရဗားရှင်း. Begin utilizing with whatever permit you to have. မြေတပြင်လုံး setup ကိုနှင့်အတူ၎င်း၏ Activation လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပေးထား.
ဘယ်လို Crack ဖို့?
အားလုံးအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် ArchiCAD ၏ပထမဦးဆုံး 20 ပေးထား Link ကိုမှ Crack.
လက်ရှိတွင်ပြတင်းပေါက် tab ကိုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်မနှင့် download, စာရွက်စာတမ်းဖွင့်လှစ်.
ArchiCAD ရြနှင့်ပြီးအောင် 20 တည်ထောင်ခြင်း
ကို restart လုပ်ပါဖို့မကြိုးစားပါ, Install / ArchiCAD အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ 20.
ပြေးလျှင်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းကို run ဖို့မကြိုးစားပါနှင့်လမ်းပြီးနောက်
#ဥပမာ: “ကို C:\_Program Files GRAPHISOFT ArchiCAD 20”
သဘာဝကျကျအစီအစဉ်ဒီဇိုင်းအသစ် incapacitate ဖို့စိတျထဲမှာကဝက်ဝံမှတ်ချက်
သင့်ရဲ့အများဆုံးကိုခစျြ firewall ကိုသဖြင့်စီမံကိန်းကိုပိတ်ဆို့
Download GraphiSoft ArchiCAD 21 ရိုက်သံ
← MS Office 2010 Toolkit ကို Doom4ရိုက်သံ →